Izibalo zibonisa ukuthi amaphesenti angu-90 amadoda cha fanele bono kanjani bamba ithambo ihembe nge ezinemikhono emide. Bamane akudingeki wenze lokhu: I-ukubukeka vigilantly washada owakwakhe futhi ungashadile uncamela yokugqoka engahleliwe ukuthi akudingi ukunakekelwa okukhethekile. Nokho, kungase kwenzeke force majeure: esigabeni sokuqala, isibonelo, umfazi wayezohamba nalabo izingane nomama sokuphumula, kanti eyesibili kube kokwenza izinguquko umsebenzi, ezidinga ukuhambisana nendlela yokugqoka. Ngo ezinjalo esimweni esicindezelayo kuyodingeka ngokushesha ukuze ufunde indlela bamba ithambo kahle ihembe nge ezinemikhono emide. Happy eyodwa: manipulation yensimbi - into elula, futhi inkosi amakhono ayisisekelo kungaba fast kakhulu.
Kulandzelana kwalokucuketfwe lokuhleliwe izenzo kanye nezinqubo wokulungiselela
Kukhona algorithm oluthile kokuba ironed shirt nge ezinemikhono emide. Akunjalo ngempela ukulilandela ngokuqinile kakhulu, kodwa uma usukwazi nje ubuciko ayina, ekuqaleni kufanele ukusigcina. kucutshungulwa oda simiswe ngalendlela lelandzelako:
Collar. Yena stroked kunesidingo njengoba iyabonakala nokunganaki ngokushesha Ubamba iso.
Cuffs. Amazwana ngazo - bayafana. Ngisho noma wena usebenzisa indlela okusheshayo, kusukela ungahleli ukususa jacket, cuffs kumele kube limi ngomumo.
Yonke ubude emikhonweni - okunzima kakhulu, phakathi kwezinye izinto, ngokuningiliziwe.
Amashalofu, okungukuthi, ngaphambili ingxenye ihembe. otglazhivaetsya kwesokudla Okokuqala, ne izinkinobho.
I backrest. I lula okuyingxenye, ngoba linemithandazo iyiphi izakhi eyengeziwe - izinkinobho, imicibisholo noma emihlanganweni.
Lapho ukuqonda indlela bamba ithambo kahle ihembe nge izinto ezinemikhono emide, ukuya ezingeni ingqondo, izandla ie ezosebenza ngokuzenzakalelayo, ungasebenza out oda lakho. Kodwa okokuqala kungcono ukuthatha isampula ezivamile.
Ebhekisela manje ukulungiselela. Ephambi kwezinduna le ayina ibhodi into nje ukuthi idinga Baby - ihembe ukoma. Uma ngomisa ihembe, ikakhulukazi kurediyetha, ironed kuyoba nzima kakhulu, ngisho ngensimbi umusi. Ngakho-ke, leli jezi kufanele afafaze kahle amanzi ahlanzekile ebhodleleni spray bese efakwa esikhwameni ngakho kungcono otmyakla kancane.
Njengoba yensimbi emide ihembe collar ukuqala, ake kubo. Elementi esiphezulu sisiba phezu underside phezulu ebhodini. Movement of yensimbi - kusuka ekhoneni elingaphandle phakathi ,. Uma akhiwa the imibimbi, ungakhathazeki: lena ngokuvamile umphumela amaphutha lokuthunga.
Khona-ke collar waphendulela ubuso sibheke. imithetho ayina ziyafana, kodwa ukubonakala imibimbi Akwamukelekile: kuzoba iphutha lakho, hhayi dressmakers.
Musa uyosula emphethweni collar emzamweni abonisa ngokunembile zezitsha encane. It ziyokonakalisa yonke imizamo yakho yangaphambilini.
Kanjani bamba ithambo a se ihembe
Sleeves (ikakhulukazi eside) - engxenyeni ezingemnandi kakhulu ayina. Inqubo iqala cuffs. Izinkinobho kubo Uzithukululile kanye collar futhi waqonda ohlangothini olungafanele ebhodini. Eshelelayo ke inqobo uze bushelelezi ngaphandle: a "umuntu" Akufanele athinte insimbi, ukuze singathwesi engimbumbile lasy.
Phambili yena emkhonweni. Uma kukhona idivayisi eyengeziwe, kumele babiza ebhodini, idonsele emikhonweni, futsi ugucuke, bamba ithambo yonke isici. Uma "umlomo wombhobho" Cha ingalo enjalo elungisa phezulu umphetho ayina; Iron ngobumnene ubabonisa phezu bonke ubuso ngaphandle kokushiya yimuphi sezimoto. kufanele kulandelwe inqubo efanayo kungenziwa, kanti olunye uhlangothi.
Kukhona impikiswano mayelana nendlela unhlangothi ihembe madoda ezinemikhono emide kwesokudla - umcibisholo noma cha. Lapha akukho umeluleki. Uma ihembe kaningi ngakho, cabanga ngendlela kukhona osebenza nabo. Uma obakhathalelayo umbono kwabanye abantu, esuselwa yabo.
Lapha iziyalezo eziqondile azidingeki, njengoba ihembe ironed nge izinto ezinemikhono emide, phambi lula kunalokho wathi emkhonweni. Báphila nabo - yibona ababenza umsebenzi. Kuyaphawuleka izikhathi ezimbalwa kuphela.
Uma eshalofini akuyona eliqinile, futhi ibhokisi top (ngokuthi ngothando), okokuqala is ironed.
Lapho ayina neengcezu, okuyinto ithungwe izinkinobho, udinga ukuya ngokucophelela azungeze yensimbi yabo. Ngaphandle kwalokho poplavyatsya. Ikhala ithuluzi bephushelwa ngobumnene phakathi omakhelwane, akangeni nabo.
Lapho ukuya eshalofini ne izihibe, kuqala smoothes bar lapho esikwa, bese kuphela - lonke.
Okunye izincomo kuphela okudliwa nokunemba. Sukela pozaglazhivaete yensimbi emphethweni, futhi ube eside futhi oyisicefe ukuqeda kubo.
Ngisho elula kunjalo ngemuva. Qala ayina ejokeni phezulu (ngemuva kungenxa zonke amahembe), ngemva kokuthuthela kusukela kolunye uhlangothi kuya kolunye, proglazhivaya emuva kanye lonke ubude. Ohlangothini kwesokunxele isiqalo noma kwesokudla - kuba induduzo yakho, ukubaluleka eziyisisekelo bese oda akunandaba.
Ukuze kufanele ahlanze futhi
Beginners Gladilschikov angase abhekane abanye enkingeni, kwenze waqonda inqubo. Futhi bonke ngenxa yokuthi akazange besithengela ngamaketanga futhi amabhodi. Uma amabala ahlale insimbi yedwa glazhek langaphambilini, ngokuqinisekile kudlule phezu izingubo. Lesi sici wenziwa ironed isikibha esimhlophe nge ezinemikhono emide: Ukuze siphephe ke otglazhivaetsya ngokusebenzisa ngendwangu ehlanzekile. Kodwa futhi ihembe elula elikhanyayo ungathola namabala amabi nepochischennoy soleplate.
Ngezinga elincane ingozi ye-ibhodi ayina. Umbala, ezinothuli noma ezingcolile, kuyokunikeza zonke izimali zabo zangaphansi. Ngakho geza izindla ke ngaphambi kokuba uyisebenzise uma ngokuqinisekile akusho ubuhlungu.
Umcabango ekubhekaneni yensimbi, abaningi kubangela kwenqatshwa njengensimbi ihembe emide futhi dreary, futhi kuyisicefe. Ungathanda ukugwema umsebenzi onjalo, zama ukusebenzisa omunye namasu.
Lapho ukugeza unqamule spin. Hang ihembe ezimanzi kwi isiphanyeko - ake notshwala ngokwemvelo. Ezimweni eziningi, akusiyo pomnetsya, nensimbi kuyadingeka.
Uma kubekwa ngenye ihembe ezimanzi ngakuyena njengoba iphele ke waqonda ngaphandle kosizo.
ihembe Otparte Hang zonke phezu isiphanyeko efanayo, wafaka yokugezela bawuhlela okugeza, ukuthumela amanzi ashisayo ku tile abandayo. Imizuzu emihlanu - futhi emigqeni washintsha.
Wiring efulethini ne izandla phezu iphaneli: imiyalelo enemininingwane
Sett: okwenza yezandla zabo. Step by step imiyalelo, kanye nezincomo ubuchwepheshe
Isikhungo sebhizinisi elisentshonalanga. incazelo
Ukuzamazama komhlaba ebulalayo Armenia - inhlekelele edabukisayo kakhulu ngo-1988
Haji Zeynalabdin Tagiyev - isicebi Azerbaijani futhi UMuphi, State iKhansela: Biography, umndeni, amaqiniso athakazelisayo zokuphila
Banteeva Natalia - owesifazane oyisangoma ngofuzo, owawina isizini 9th we "Battle of izangoma"
Ushizi ikhekhe: iresiphi imizuzu emihlanu!
Ukususwa warts Laser